Nefa raha jerentsika dia 5 500 miliara ariary no lany amin'ny fampandehanan-draharaha na fonctionnement, fa 850 miliara kosa ny fampiasam-bola na investissement.
Izany hoe 87% lany amin'ny fonctionnement ary 13% ny investissement.
Izao ilay fitantanana manao tsingolobatita, izany hoe ny loha no atao ambany, satria dia ny vola ampiasaina no kely lavitra noho ny fampandehanan-draharaha.
Ohatra: Nanangana tsena kely isika,
Dia ny vola lanitsika nividianana entam-barotra entina amidy, mitentina 1 300 000 ariary ny totaliny, fa ny hofatrano sy karaman'ny mpiasa, jiro sy rano ary frais, mahatratra 8 700 000 ariary.
Ka na tsy nianatra aza tsy avy dia hilaza hoe hakatony ny tsena fa fantiantoka iray lavaka?
Ka izay ilay harenintsika amin'ny alalan'ilay carte électronique aloha, mba hiakatra 75% ny mpandoa hetra fa tsy hijanona 15% amin'izao io. Rehefa mampiasa ilay carte dia vao mividy entana isika dia miala ho azy ny TVA, mandeha any amin'ny kitapom-bolampanjakana.
Ary atsimbadika ny fandaniana, ny investissement na fampiasam-bola ka hampidi-bola no atao betsaka noho ny fampandehanan-draharaha.
Esorina izany izay fandaniana tsy ilaina:
- Fohanana ny Senat;
- Fohanana ny primature;
- Ferana 60 ihany ny isan'ny député fa tsy 150;
- Minisitra 15 ihany fa tsy 33;
- Miala ny CFM, ny CENI, ireny rafitra ONE izay efa misy ministera misahana an'izany;
- Mihena daholo ny karaman'ny mpitondra, tsy misy mahazo fiara sy carburant mitokana izany, tsy misy garde corps sy mpiasa an-trano izany, samy manao ny fiainany amin'ny karamany.
- Miala ny Faritany 6, ny Faritra na région 22, Distrika 110, soloina Faritra 3 ihany, Avaratra, Afovoany, Atsimo.
Asiana reclassement hiasa amin'ny toeran-kafa mamokatra mampidi-bola ny mpiasa amin'ireny.
Tsinjaraina amin'ny amabaratongam-pahefana rehetra ny teti-bola.
aha miainga amin'ny efa misy ankehitriny izany, 5 000 miliara Ariary dia:
Fokontany (20 000 isa): 50% n'ny tetibola (125 millions ariary isan-taona - 625 millions fmg)
Kaominina (1 600 isa): 25% (78 millions ariary - 390 millions fmg)
Faritra (3): 10% (167 milliards ariary - 833 milliards Fmg)
Foibe: 15% (753 milliards ariary - 3 767 milliards fmg)
Ka raha miditra ny carte électronique dia hiakatra 5 avo heny avy izany ireo teti-bola isam-pokontany sy Faritra ireo, ka ny Fokontany iray, izay misy mponina 1 000 eo, izany dia hitantana any amn'ny 625 millions ariary, na 3 miliara fmg;
Tsinjaraina amin'ny Fokontany 20 000 ireo Manampahaizana, injeniera, dokotera, mpampianatra... ka samy mahazo 25 avy.
Alefa miasa hanao ny asa vaventy rehetra ny 4 000 000 Service National, izay asa ampidi-bola ny maro no ataon'ireo
- Fambolem-bary, izay ampiditra 30 milliards de dollar raha 10% velaran-tanitsika fotsiny no ambolena vary, raha 3,5% izy amin'izao, ary akarina 4 tonne/ha fotsiny ny rendement na ny vokatra, raha 2 tonnes/ha izy izao;
- Eo ihany koa ny fambolena fary sy mangahazo, anaovana siramamy ka ahazoana éthanol, mba tsy animbantsika ny ala sy ny tontolo iainana amin'ity fanaovana charbon ity;
- Eo ny fametrahana biogaz isam-pokontany;
- fambolena ireo voly fanondrana, lavanila, kafe, jirofo, cacao, poavra, letchi...
Ireny vola miditra ireny dia anaovana investissement na fotodrafitrasa, toy ny:
- Autoroute, ny lalana, ny lalamby, seranam-piaramanidina vaventy, seranan-tsambo vaventy;
- Barazy fambolena sy famokarana herin'aratra;
- Canal de Pangalanes, ny fampidirana rano fisotro;
- Sekoly, Université 3 lehibe, iray isaky ny Faritra, Avaratra, Afovoany, Atsimo;
- Hopitaly sy toeram-pitsaboana;
- Fambolena sy fiompiana vaventy;
- Fitrandrahana harena ambony sy ambanin'ny tany, ny fitrandahana pétrole, gaz, volamena, bois de rose, bois d'ébène, pallisandre;
- Ny jono, ny ranomasina;
- Fampiroboroboana ny fizahantany na ho an'ny Malagasy na ho an'ny vahiny
- Fambolen-kazo, samy mamboly zanakazo 1 isan'andro ny Malagasy rehetra ao anatin'ny 4 taona (300 fototra isan-taona isan'olona)
- Ny fandriampahalemana, ny fiarovana ny sisin-tany, ny anabakabaka, ny fiarovana ny harenam-pirenena, fividianana sambo sy fiaramanidina haingam-pandeha, helicoptère, ady amin'ny dahalo...
Ka ireny vola miditra ireny izany no averina amintsika amin'ny alalan'ilay carte électronique, ka dia samy mahazo vary 150Kg, éthanol 30 litres, rano 15m3 isam-bolana, isan-tokatrano ny Malagasy rehetra.
Ary vatsiana panneau solaire ny tokatrano rehetra, ka alefa amin'io carte électronique io ihany koa ny vidin'ny panneau solaire 1 500 000 Ariary (7 500 000 fmg), izay averina 15 000 ariary isam-bolana ao anatin'ny 10 taona. Tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa io vola io, fa ireo mpivarotra efa nekena hivarotra panneau solaire, garantie 10 ans, ihany no afaka misintona an'io amin'ilay carte électronique.
Samy mahazo tany 1 000m² isan'olona ny Malagasy rehetra na menavava aza.
Ka aza manaiky lemen'ny olona ny saintsika fa mijoroa ho an'ny Fahaleovantenantsika, aza amidy amin'ny tee-shirt ny ho avinao. Entano ny rehetra ary zarao sy partager-o maximum ny tetikasantsika.
Fianarantsoa: Salon du Bon et du Goût andiany faha-5
Toamasina: Mikatso efa iray volana izao ny asan’ny sampan-draharahan’ny hetra »